ဣဿရ ထံပါးသို့ တစ်ခေါက်တစ်လေ | ZAYYA
← Lion’s roar
အပြစ် ဟူသည် →
ဤသည်မှာ- စကြာဝဠာ အနှံ့အပြား၊ နေရာပေါင်း များစွာ သို့၊ ဘဝ ခန္ဓာပေါင်း များစွာ ဖြင့် ကျွန်ုပ် ပြေးလွှား နေခဲ့မိခြင်း အကြောင်း ဖြစ် သည်။
တစ်နေ့ တွင်တော့ အချိန် ကျပေပြီ။ ဣဿရ အရှင် – ဘုရား သခင် ၏ အိမ်တော် တံခါးဝ သို့ ကျွန်ုပ် ဆိုက်ဆိုက် မြိုက်မြိုက် ရောက် ၏။ မိမိ ကိုယ် ကိုပင် ယုံနိုင်ဖွယ် မရှိ။ တုန်လှုပ် အံ့ဩစွာဖြင့် ပါးစပ် အဟောင်းသား ဖြစ်ခဲ့ရ သည်။ တုန်ရီသော ခြေလှမ်းများ၊ ဝမ်းမြောက် သော ခြေလှမ်းများဖြင့် – ကျွန်ုပ် တံခါး အနား သို့ ကပ်လာ ခဲ့သည်။ အမှန်ပင် – ဤအိမ်တော် သည် ဘုရားသခင် ၏ အိမ်တော် ဖြစ် ၍၊ ဤ တံခါးဝ သည် ဘုရားသခင် အိမ်တော် ၏ တံခါးဝ ဖြစ် သည်။ ကျွန်ုပ် ရောက်ပြီ။
တံခါး ခေါက်ရန် အပြု၊ ကျွန်ုပ် ၏ လက်တို့ ထုံကျင် နေသည် ကို တွေ့ရ၏။ အတွေး တစ်စ ဝင်လာ သည်။
“ခဏ နေပါဦး – စဉ်းစား ပါဦး – အခု အိမ်တော် တံခါးဝ တွင် ရေးထား သည်မှာ အမှန်ပင်၊ “ဤ အိမ်တော် သည် ဣဿရ ၏ အိမ်တော် ဖြစ် သည်” ဟူ၏။ အကယ် ၍ သာ ကံအား လျှော်စွာ ဘုရား သခင် ၏ အိမ်တော် စင်စစ် ဖြစ်ခဲ့ လျှင် – သင် ဘာလုပ် မည်နည်း။ သင် တစ်လျောက်လုံး လုပ်ခဲ့ သမျှ ပြီးဆုံး သွားပြီ၊ နိဋ္ဌိတံ ပေ ပြီ၊- သင် ဘာ ဆက်လုပ် မည်နည်း။ အခု ဣဿရနှင့် ကြုံဆုံ ပြီးနောက် တွင် သင် ဘာပြုစရာ ကျန်သေး သနည်း။
“နှစ်သန်း ပေါင်း အလီလီတွင်- ခန္ဓာပေါင်း များစွာ ဖြင့်- ရှာဖွေခြင်း အမှု ပြု ခဲ့သည်။ ရှာဖွေခြင်း အတတ် ပညာ ၌ ကျေပွန် စွာ လေ့လာ ခဲ့သည်။ ဆရာ တစ်ဆူ အလား – သင်ယူ ခဲ့သည်။ သူ့ကို ရှာဖွေ ရင်း၊ သူ့ကို တွေ့လိုခြင်း ဟူသော စိတ် တစ်ခု တည်း ဖြင့်သာ အချိန် တွေ ကုန်ဆုံး ခဲ့သည်။ ယခု အဆုံး သတ် ပန်းတိုင် သို့ ရောက် လာခဲ့ပေ ပြီ။ သင် ဘာ လုပ်မည် နည်း။ အရာ အားလုံး ပြီးဆုံး သွားပေတော့ မည် မဟုတ်လော ။ တွေ့ပြီး သည့် နောက် ရှေ့ ဆက် – သင် ဘာပြု ရပါဦး မည်နည်း။ အရာရာ သည် ထာဝရ ပုဒ်မ ချပြီး ဖြစ်တော့ မည်။ အဆုံးသတ်၊ ရပ်ရပေတော့မည်။”
ကျွန်ုပ် ၏ သန္တာန် အတွင်း – ကြောက်စိတ် သည် ကျယ်လောင် စွာ တုန်ရီ မြည်ဟည်း လာခဲ့၏။ မိမိ စီးနင်းထားသော ဖိနပ် ကို ကောက် ကိုင် လိုက် သည်။ တံခါးနား ကပ်လာမိသော ကျွန်ုပ် ၏ အသံကို အိမ်တော်တွင်းမှ ဣဿရ အရှင် ကြားသိ သွားပါ မည်လား – သူ ထ လာ၍ တံခါးတော် ကို ဖွင့်မည် လား – စိုးရွံ့မိ သွား သည်။ ကြေက် ရွံ့စိတ်သည် ကျွန်ုပ်၏ နှလုံးအိမ် အတွင်း အဟုန်ပြင်း စွာ ပေါ်ထွက် လာ ခဲ့သည်။ တံခါးသံ ကလစ် တစ်ချက် ကြားရ သည်။ ကျိန်းသေပြီ – အရှင် တံခါး လာ ဖွင့်ခြင်း ဖြစ် မည်။ အရှင့် ရှေ့မှောက် ကျွန်ုပ် ရောက် ရတော့ မည်။ အကျွန်ုပ် မည်သို့ ပြုရ ပါမည်နည်း။
ရုတ်ခြည်းပင် ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ထားသော ဖိနပ် ကို ပိုက် လျက် ကျွန်ုပ် ထွက်ပြေး ပါတော့ သည်။ မည်သည့် အခါ မျှ နောက်လှည့် မကြည့်တော့။ နောက်ကြောင်း ပြန် ကြည့်ရန် မလိုတော့။ ဤ အိမ်တော်နှင့် အဝေးဆုံး သို့ ….. ကျွန်ုပ်…. တရွေ့ရွေ့ … အဝေးဆုံး …….။
~ In the Search is the Ego.
July 6th 2012 at 4:20 PM